Walii Galtee Jaarmayoota Oromoo Afran jiddutti tahe … -
Walii Galtee Jaarmayoota Oromoo Afran jiddutti tahe …
Walii Galtee Jaarmayoota Oromoo Afran jiddutti tahe Ilaalchisuun Ibsa JTBO-ABO-Yemen Irraa Kenname Jaarmayaan Tokkummaa Baqattoota Oromoo ABO-Yemen Kan Jijjiiramaa Akkuma jijjiiramni Mooraa qabsoo Oromoo Keessatti Uumameen Jaarmaya Isaaf labsa baasuun Jaarmaya Dursee Saffisa Mooraa qabsoo Oromoo Keessatti Uumame akeekaafii Kaayoo isaatti amanuun Jaarmaya Amin Jedhee fudhateedha Jaarmayaan ABO jijjiiramaa rakkoollee Mooraa qabsoo Oromoo Keessatti Baroota dheeraaf dhalataa ture hunda Ummatatti gadi Buusuun haaromsa mooraa qabsoo Oromoo akka milkaayuuf jaarmaya kutannoon jaarmayoota saba Oromoof qabsaawan hundaaf lallaba Hiriyaa hin qabne godhaa tureef godhaa jiruu tahuu isaanii Ni dinqisiifanna addatti Immoo addaan Faca’uu Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo Salphinna tahuu hubachuun Jaarmaya Akeekaaf tokkummatti Amane tahuu Isaa Gammachuun fudhanna.
Kan Kana Irraa hafe Tokkummaan Jaarmaya Afur jiddutti tahe Tokkummaa Haqaaf Dimokraasii Ribuu akka lafee duugdaa tahuun fedhiifii Kaayoo Oromoo galmaan gahuuf Jaarmayaa Cichaan dalagaa jiru tahuu isaa Nu Onnachiisa.
JTBO-ABO-Yemen qaxxaamura Akkaan danqaa tahe Keessa qaxxaa muruun Biyya Ilmi Namaa halkan tokkoofillee rafee hin bulle keessatti qabsoo Oromoo Cinaa dhaabbachuu Irraa Duubatti deebi’ee hin beeku . jaarmaya tokkummaa sabaatti Amanu tahuu isaatiin Gidiraa koola Galtoota Oromoo Galoo galaanaa qaxxaa muruun Yemen Seenan Gochaa Suukaneessaa Isaan Mudate Jaarmaya Dursee baalaleffatu dhiigni Saba keenyaa Jiguun Isa Gadisiisu tahuu ibsa jaarmayoonni TBO-ABO-Yemen Tokkummaa Jaarmayoonni Afur Godhan Gammachuudhaan fudhachuun Guurmuuwwan Jaarmayoota walii galanii Waliin hojjachuuf Marii bal’aafii xiinxala Guddaa gochuun Caasaa afran waliin marii bal’aa gochuun muuxannoowwan baroota dabran Irraa ka’uun qabsoo Saba keenyaa Milkeessuuf Isa duraa Caalaa tattaaffii walirraa hin cinne Nu feesisa Jechuun Ibsa bal’aa Godhaniiru.
Walii galtee guurmuu afranii kanarratti namoonni baay’een argamaniiru. Maanguddoon ,Hawwoonni dardaraafi Shammarran heddumminnaan argamuun kanneen qabsoo Oromoo Keessatti Umrii dheeraa qaban Seenaa darbe Kaasuun Hawaasa garaa raasaniiru.
Akka Aannan Sa’a tokkoo nu haa godhuun xumuruun .
Ibsa Ejjannoo qabxii 15 Ofkeessa qabu baafachuun Murannoofi kutannoo Keenya Ibsanna
1, Dirqama qabsoon Gaafattu bifa kamuu bahuuf qophiidha!!
2, Dhaaba Keenya cinaa hiriiruun Aggamata Tokkummaa qabsaawotaa Irratti godhamu Ni balaaleffanna!!
3, Caasaa Jaarmayoota afran walii Galanii waliin hojjachuuf qophii xumurachuu Keenya Ibsanna!!
4, Gochaa Suukanneessaa Saba Keenya Alaafi Keessatti Mudachaa jiru yoomuu ni balaaleffanna!!
5, hawaasa Keenya Gurmeessuun Kaayoo dhaaba keenyaa Galmaan gahuuf Yomuu ful duratti tahuu kenna Ibsanna!!
6, tokkummaan fedhiifii hawwii ummata Oromoo tahuu Amanuun Kan cimsinnaan irratti hojjannu tahuu ibsanna!!
7 ,aqabsoon hidhannoo ABOn Gaggeessu Afaan qawweetiin alatti Milkaawuu akka hin dandeenye sabni hundi akka hubatu barbaanna!
8 tokkummaan saba Keenyaa Oromummaa qofaan walitti hidhamee akka jabaatu dhaamsa Keenya kan Oromummaa Ibsanna!!
Gadaan Gadaa tokkummaaf Walabummaa Oromiyaati!!!!!!!!!!!!!
Tokkummaan human keenya!!!
Previous Hawaasa Muslimaa Afaan Oromoo Dubisu hundaaf !
Next Duguuggii sanyii Ruwandaa fi Czechoslovakia keessatti raawwatame, oromiyaa keessatti raawatamuuf itti jiramuuf, jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo waanta hubachaa jiran hin fakkaatu ykn qaama rakkoo ta’uuf jiru.